Intel Last Oasis Hack ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
⬤ ọnọdụ: Testing
Intel Ikpeazụ Oasis mbanye anataghị ikike
Ikpeazụ Oasis Intel bụ ihe ngwọta zuru oke maka onye ọ bụla na-achọ ụfọdụ "enyemaka".
Chee ike nke Ikpeazụ Oasis Intel maka ntakịrị ma hụ ihe ọ bụ. Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Nweta ohere mbanye anataghị ikike # 1 ikpeazụ ị ga-ahụ na ịntanetị. Zụta otu ngwa ahịa izu 1 taa!
Gamepron nwere obi ụtọ karịa ijere ndị ahịa ozi ogologo oge achọrọ. Keyzụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa!
Kwesighi ịbanye na nzuzo mgbe ị na-egwu Oasis Ikpeazụ, ebe ngwaọrụ anyị nwere ike inyere gị aka ịchọpụta ozi ndị ọzọ gbasara gburugburu gị. Mụọ maka ebe ndị iro na egwu ndị ọzọ site na iji ESP enyere na Last Oasis Intel.
Ikpeazụ Oasis Intel Hack Information
Ikpeazụ Oasis bụ a lanarị egwuregwu na-aga nwalee uche gị ịdị ndụ, ọ bụ ezie na iji ikpeazụ anyị Oasis Intel mbanye anataghị ikike na-aga-eme ka na a dịtụ mfe ihe na-eme. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ ga - agbasi mbọ ike ịnakọta ihe ndị kwesịrị ekwesị ma lụso ndị na - apụnara mmadụ ihe ike (na ndị iro n'ozuzu ha), ndị gị nwere ohere ịnweta Oasis Intel ikpeazụ anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla. Nwere ike kama nwee ike Oasis Aimbot na ESP / Wallhack, na-enye gị ngwaọrụ achọrọ iji kpochapụ ihe ọ bụla na-anwa anwa iguzo n'ụzọ gị.
Intel Cpu Naanị
Iro na Nkebi ESP (na nzacha) nwere ike ịchọta na mbanye anataghị ikike a, mana nke ahụ bụ mmalite! Enwere ego nlele iji tụlee, yabụ na ị gaghị echebara ma onye iro ọ dị maka ịgụta ọnụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Mfe kacha mma Oasis ikpeazụ mbanye anataghị ikike wepụtara!
Onye iro ESP (igbe, ọkpụkpụ)
Ozi Iro (ahụike, anya)
Ihe ESP na nzacha
Nzipụta ndenye ego
Banyere Oasis Ikpeazụ
Ọ bụ nkịta na-eri nkịta ụwa mgbe ị na-egwu Oasis Ikpeazụ, mana obi ekele, mbanye anataghị ikike a ga-ekwe ka “ọnyà” gị dị ike karịa ọtụtụ. Kwesighi inwe olile anya nke ikpeazụ Oasis mbanye anataghị ikike mechara kpebie ịrụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ naanị na-arụ ọrụ na nhọrọ dị elu (dịka Last Oasis Intel) ga-enyere gị aka izere nsogbu. Anyị ọrụ nwere ike ọbụna enuba mgbe eji anyị hacks, dị ka Stream Mode nhọrọ zuru okè mgbe ị na-agbalị ịbụ onye nwere uche. Nwere ike iji ngwá ọrụ a na ihuenyo zuru oke, ị ga-enweta HWID Spoofer ọzọ mgbe ịzụrụ igodo ngwaahịa.
Kedu ihe kpatara iji Oasis Intel ikpeazụ karịa ndị ọzọ na-enye ọrụ?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ agaghị emeso gị dị ka anyị na-eme, ebe Gamepron raara onwe ya nye iji nye ndị ọrụ anyị ahụmịhe bara uru. Nke a bụ ihe na - eme ka anyị dị iche na ndị asọmpi ndị ọzọ, ebe ha chọrọ inweta ego gị ma hapụ gị - anyị na - emelite ngwa ọrụ anyị oge niile, na - achọ ịdị ukwuu na ntọhapụ ọ bụla! Ikpeazụ Oasis Intel ga-abụ ihe kacha mma Intel dabeere na Ikpeazụ Oasis mbanye anataghị ikike dị na ntanetị, anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị ogologo oge ha chọrọ. Mepụta ọdịnihu gị ma nwee mmetụta dị ka ọ kachasị na Last Oasis maka otu oge! Echegbula na-eme, anyị ngwaọrụ nwetara ya.
In-game menu awa a ngwá ọrụ na-aga na-eso na-emekarị nke anyị ọzọ hackers, nke pụtara na ị ga-enwe ike ịgbanwe ihe ọ bụla ị chọrọ mgbe ọ na-abịa gị mbanye anataghị ikike ntọala. Gbanwee otu nnukwu nhọrọ ESP iro gị si egosi na ihuenyo, yana ihe ị ga - ahụ - ị nwekwara ike ịhazigharị nke Nkebi ESP ga - egosi site na ebe siri ike / na - enweghị mma. Nzipụta Lelee nwere ike nyeere (ma ọ bụ nkwarụ) iji na-game menu dị ka nke ọma, ikwe gị aghụghọ aghụghọ mbanye anataghị ikike na-egwu “ọcha” mgbe ọ bụla ọ na a chọrọ. Nka a hacking ahụmahụ nke gị onwe gị site na inweta ohere Ikpeazụ Oasis Intel-aghọ aghụghọ ule!
A6. Ee, enwere ike iji ya na onyo ihuenyo.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, nchekwa bụkwa ihe kachasị mkpa ebe a na GamePron. Nwere ike ịdabere na anyị ka anyị wepụta ngwa ọrụ echekwara echedo oge ọ bụla, yabụ enweghị mkpa ichegbu onwe gị banyere mmachi.
Mbanye anataghị ikike na ọgụgụ isi na ohere anyị ikpeazụ Oasis Intel mbanye anataghị ikike taa!
Njikere Na-achị na Ikpeazụ Oasis Intel Hack?